यत्रो महामारीमा कहाँ सुतेको छ, अमेरिकाको नेपाली दुतावास ? – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
प्रकाशित मिति: १६ चैत्र २०७६, आईतवार
गोकुल ढकाल /लस एन्जलस – संसारकै बैभव मुलुकको रुपमा कहलिएको अमेरिका कोरोना भाईरस संक्रमणको महामारीले सबैभन्दा बढी आक्रान्त छ । एक लाख पच्चिस हजारभन्दा बढी मानिस यो महामारीबाट पीडित भएका छन, अमेरिकामा । जुन संसारमै सबैभन्दा बढी हो । लस एन्जलसमा बिगत छ दिनमा यो रोगको महामारी तेब्बर रुपमा बढेको छ । लस एन्जलसका मेयर एरिक गार्सेटीले मे १ सम्मको लागि सबै ब्यवसायिक संस्थाहरु बन्द गरी ‘घरभित्रै रहन’ अनुरोध गरेका छन । पुरै लकडाउन नभएपनि अमेरिकामा सबैभन्दा बढी सवारी ट्राफिक जाम हुने लस एन्जलस सुनसान छ । हलिवूड, डिस्नील्यान्ड लगायत सामुद्रिक विचहरु बन्द छन ।
न्युयोर्क शहर अमेरिकामा सबैभन्दा बढी संक्रमित छ । यो लेख्दै गर्दा म नेपाली जनसंपर्क समिती अमेरिकाका पुर्व संयोजक बिष्णु सुवेदीको संयोजनमा अमेरिकाका बिभिन्न तप्कामा रहेका ७० जना महानुभावहरुको कन्फेरेन्स बैठकमा सामेल छु । अपरान्ह ३ बजेदेखी शुरु भएको बैठक ४ घण्टा बितिसक्दा संक्रमणमा नेपाली समुदायलाई कसरी बचाउने भनेर छलफलमा ब्यस्त छ । सामुदायिक सेवामा जुटेको एनआरएनए अमेरिका न्यूयोर्क च्याप्टर, सयौं स्वयंसेवक र स्वास्थ्यकर्मीहरु ज्यानअको बाजी लगाएर न्युयोर्कका सडकमा राहत र स्वास्थ्य सामग्रीहरु वितरण गर्न कुदिरहेका छन ।
कसैलाई नछोडेको कोरोनाको संक्रमणले नेपाली समुदायलाई पनि किन छाड्थ्यो ? न्यूयोर्कमा गत हप्ता सामाजिक अभियान्ता अनिल सुब्बाको मृत्‍यु भएपछी नेपाली समुदायमा पनि संक्रमण बढेको आशंका अहिले आएर न्यूयोर्कका तीन अस्पातलमा करिब ३० जना नेपाली यो महामारीको उपचार गराईरहेको जानकारी छ । त्यसो त अस्टिन र डलासमा पनि केही नेपाली यो महामारीबाट संक्रमित भएको कुरा सार्वजानिक भएको छ ।
न्यूयोर्कमा अझै धेरै नेपाली समुदायका सदस्यहरुले आफुमा संक्रमित रोग लुकाईएको आशंका गरिएको छ । स्यानिटाइजर, प्लास्टिक पन्जा, मास्क र थर्मोमिटरको अत्यधिक माग भएको न्योयोर्कमा त्यो सामानको अभाव खड्किएको छ । बहु-परिवार एउटै कोठामा बसिएको अवस्था, तिनका बालबालिका र एउटै अपार्ट्मेन्ट भवनमा हजारौं परिवार बसिएको अवस्था, त्यो भवनको एलेभेटर तथा शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले अझै बढी संक्रमित हुने कुरामा दुविधा छैन ।
न्यूयोर्कमा कति नेपाली संक्रमित छन, कुनै । यो बैठकमा एनआरएन अमेरिका, न्यूयोर्क च्याप्टरका उपाध्यक्ष शिव बानियाकानुसार सत्तरी जनाभन्दा बढी नेपाली संक्रमित छन । फिल्डमा प्रत्यक्ष काम गरेका बानियाजस्ता स्वयंसेवकहरुको कुरालाई सुन्ने हो भने २००० मास्क, हजारौं स्यानिटाईजर, सयौं थर्मोमिटरहरुको आवश्यकता छ । संक्रमितहरु बस्ने ठाउँं छैन । न्यूयोर्कका डाक्टरहरु प्रत्यक्ष भेट्न चाहदैनन, रोगीलाई चाहिएको औषधी मात्र लेख्न तयार छु भन्छन रे ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताको करले ठडिएको अमेरिकास्थित नेपाली दुतावास कहाँं सुतेको छ ? ८ मिलियन डलरको राजदुत बस्ने भवन खरिद गर्ने नेपाल सरकार न्यूयोर्कमा सयौंको संख्यामा महामारीले संक्रमित नेपालीहरुको उपचार, ब्यवस्थापन, सहयोग र आश्वासनको लागी के गरेको छ ? जानकारी भएनुसार अमेरिकास्थित नेपाली दुतावासले एउटा कन्फेरेन्स बैठकको आयोजना गरेको छ । को को थिए, कमैलाई थाहा छ ।
राज्य र राज्यको प्रतिनिधीको उपस्थिती त्यहां चाहिन्छ, जहाँ जनताहरु समस्याले प्रताडित छन । महामारीको त्राहिमाममा जिएको न्यूयोर्कको नेपाली समुदायलाई के गरेको छ, अमेरिकास्थित हाम्रो दुतावासले ? धेरै कुरा नलेखौं, महामारीको चपेटाले घरभित्र पिल्सिएको बेलामा !